३२ बर्षपछि फ्रान्स र बेल्जियम विच सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा, १९ बर्षे एमबाप्पे र लुकाकु मा को बलियो ? - Seto Khabar ३२ बर्षपछि फ्रान्स र बेल्जियम विच सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा, १९ बर्षे एमबाप्पे र लुकाकु मा को बलियो ? - Seto Khabar
३२ बर्षपछि फ्रान्स र बेल्जियम विच सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा, १९ बर्षे एमबाप्पे र लुकाकु मा को बलियो ?
को बन्ने छ फिफा विश्वकप च्याम्पियन ? यो सवालको जवाफ चार वटा टिममा लुेकेको छ । ति चार टिम, जसले रुस विश्वकपको सेमिफाइनलमा ठाउँ बनाएका छन् । सेमीफाइनलको लागी सम्पुर्ण तयारी पुरा भईसकेको छ अब केबल को हुने भन्ने मात्र हेर्न वाँकी छ ।
पहिलो अन्तिम चार प्रतिस्पर्धामा १९९८ को च्याम्पियन फ्रान्स अहिलेसम्म यो विश्वकपमा अपराजित बेल्जियमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ त दोस्रो सेमिफाइनलमा १९६६ का विश्वकप विजेता इङ्गल्याण्ड को प्रतिस्पर्धा अदृष्य शक्ति क्रोएशियासँग हुनेछ । यी चार टिमको दाबेदारी अब विश्वकपको त्यो शिर्षक कब्जा गर्नेमा हुनेछ ।
युरोपको छिमेकी देश फ्रान्स र बेल्जियम मंगलबार विश्वकपको पहिलो सेमीफाइनलमा एक–अर्कासँग आक्रमणको तयारीमा छन । दुबै तर्फ अग्रिम पक्तिमा युवा स्टारहरु छन जसले बल गोली लगेको जस्तो गोल पोष्टमा लगेको हेर्न पाइनेछ । दुबै टिमको टक्कर १९८६ विश्वकपमा तेस्रो स्थानको लागी भएको प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सले ४–२ ले जित्नमा सफल भएको थियो । यद्यपी, यो दौरान आठ पटक दुबै टिम आईसकेका छन् । यस मध्ये दुई जित बेल्जियमले आफनो पोल्टा पारेको छ जसमा पछिल्लो भिडन्त पनि पर्दछ ।
बेल्जियमको अहिलेसम्मको यात्रा
ग्रुप चरणः पनामालाइ ३–०, ट्युनिशियालाई ५–२, इङ्गल्याण्ड लाई १–० ले हराएको छ ।
नकआउट अन्तिम १६ मा जापानलाई ३–२ ले हरायो भने क्वार्टरफाइनलमा पाँच पटकको विश्वकप विजेता ब्राजीललाई २–१ ले पराजित गर्यो ।
महत्वपुर्ण क्षण : दोस्रो चरणमा बेल्जियम जापानद्धारा ०–२ ले पछाडि परेको थियो, उसले विश्वकप इतिहास अविष्मरणिय पुर्नारगमण गर्दे प्रतिस्पर्धामा ३–२ ले जित हासिल गर्यो ।
शक्ति : मिडफिल्डर केविन डि ब्रूइन प्लेमेकिंगमा माहिर र स्वयम पनि गोल गर्ने क्षमताका खेलाडी । रोमेलु लुकाकु प्राय गोल गरीरहेका छन् भने गोल गर्नमा महत्वपुर्ण भुमिका निभाइरहेका छन् ।
कमजोरी : म्यान्चेष्टर सिटिको विसेट कक्पनि चोट पछि खेलमा फर्किएका छन्, तर यी स्टार खेलाडी अहिलेसम्म आफनो जादु देखाउन सकेका छैनन ।
कोच- रोबोर्टो मार्टिनेज –अहिलेसम्म रेड डेभिल्सले आफनै देशको कोचलाई भरोसा गरेको छ । विश्वकपमा १९५४ पछि मार्टिनेज बेल्जियमका पहिलो स्पेनिस कोच हुन् । मार्टिनेज रणनिति बदल्नमा माहिर छन् । उनको ब्राजील विरुद्धको खेलमा ३–४– को रणनिति एकदम सफल भएको थियो ।
– १९८६ मा अर्जेन्टिनासँग हारेको बेल्जियम । बेल्जियमको लागी ९ अलग अलग गोल स्कोर रहेको छ । २००६ मा इटली र २०१० मा फ्रान्सका १० खेलाडीले गोल गरेका थिए ।
– १४ सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी छन् बेल्जियमको टिममा ।
फ्रान्सको अहिलेसम्मको यात्रा
ग्रुप चरण ; अष्ट्रेलियालाई २–१ ले, पेरुलाई १–०, डेनमार्कसँग गोलरहित बराबरी खेल्यो ।
नकआउट अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिनालाई ४–३ ले पराजित गर्यो । क्वार्टरफाइनलमा उरुग्वेलाई २–० ले हरायो । एमबाप्पे ले टिमको लागी यो विश्वकपमा ३ गोल गरे । एटोनी ग्रीजम्यानले चार म्याचमा दुई गोल गरे ।
शक्ति : ग्रुप यात्रापछि नकआउटमा मिडफिल्डर र अग्रिम पक्ति धेरै राम्रो फर्ममा छ । एमबाप्पे र ग्रीजम्यानले देखाए शक्ति । यद्यपी, ओलिवर जिरुमाथि भने प्रश्न उठेको छ तर पनि उनले गोल गर्नमा सहायता गरेका छन् ।
कमजोरी : सबै खेलाडी आफनो जिम्मेदारी राम्रोसँग निभाइरहेका छन्, तर म्याचेष्टर युनाइटेड को लागी खेल्ने पाल पोग्बा अहिलेसम्म आशा गरीएजस्तो खेलेका छैनन् । उनले अष्ट्रेलिया विरुद्ध १ गोल गरेका थिए ।
कोच–डिडिएर डेशच्याप– लगातार दोस्रो कपमा फ्रान्सका कोच छन् । १९९८ मा विश्वकप विजेता बनेको टिमको कप्तान बनिसकेका थिए । विश्वकप बाहेक उनी कोच बनेको यो ११ औ म्याच हो । धेरै राम्रो नखेल्दा पनि उनले पोग्बालाई भरोसा गरेका छन् ।
विश्वकपमा दुई म्याच फ्रान्सले १९३८, १९८६ मा बेल्जियमलाई जितेको थियो ।
राष्ट्रिय रिङ रेस्लिङ च्याम्पियनशिप शनिबार, नुवाकोटे टाईगरसहित एक दर्जन रेस्लर सहभागी
आईसीसी महिला विश्वकप: थाईल्याण्डसँग नेपाल ५७ रनले पराजित
भारतलाई इमरान खानले दिएको जवाफलाई शाहिद अफरीलीको सपोर्ट, भने– ‘एकदम ठोस र स्पष्ट’